यस्तो छ कथा “द भ्वाइस अफ नेपाल” 180/130 ! « LiveMandu
९ मंसिर २०७५, आईतवार २२:३५
एस उपाध्याय – मंसिर ५, काठमाण्डौ । केही कुरा प्रस्तुत गरेर हेर्नेको, सुन्नेको र महशुस गर्नेको मन छुन सक्नु र अाहा भन्न सक्नु कुनै जोक भने हैन । कसैले भन्छन् दुनियाँमा सबैभन्दा गार्ह्रो काम भनेको कसैलाई हँसाउनु हो भने कसैले भन्छन् कसैलाई रुवाउनु हो भने कसैले अाफ्नो कथाबाट कसैलाई हल्लिने पनि मौका नदिनु हो ठान्दछन् ।
तर वास्तवमा एउटा राम्रो चलचित्र, ड्रामा, सङ्गीत अथवा शो कस्तो शोलाई भनिन्छ; मन परेर धेरै हुटिङ हुने, सिटि बज्ने, रुने अथवा हाँस्या हाँसे हुने तर ठ्याक्कै कस्तो त?
लाइभमाण्डू टोलीले बिगत १ महिनादेखि एउटा यस्तै सफल शोको अति ब्यस्त प्रोडक्सन टोलीलाई नजिकबाट पछ्याइरहेको छ । हेर्दा लाग्थ्यो एउटा रोबोटिक टोली हेभीड्यूटी ब्याट्रिका साथ अाफ्नो काम सम्पन्न गर्न दौडेछ दौडेछ… कहिले क्यामेरा, कहिले लाइट, कहिले होष्ट, कहिले एडिटिङ त कहिले कोचसंग सम्बन्धित अनेकानेक गतिविधिमा अति तिब्रताका साथ १५-१८ घण्टा बितेको समय । अाँखा अगाडि अत्ति छिटो छिटो सम्पन्न हुँदैगरेको हरेक एउटा शोको तयारीले अब उपरान्त यो कभर गर्न जानु नपरोस् झै लाग्ने, सार्ह्रै अत्याउने खालको को रैछ हेर्नेहरुका लागि, सुन्नेहरुका लागि र महशुस गर्नेहरुका लागि एउटा सुपरहिट शो बनाउनु ।
लौ चिन्नुहोस् ,को हुनुहुन्छ वहाँ ?
बिरामी निर्देशकका साथ द भ्वाइस प्रोडक्सन टोली मध्यराती चकलेटको स्वादमा ।
हामी कुरा गर्दैछौं छोटो समयमा सफलताको स्वाद चाख्न सफल एउटा रियालिटी शो को प्रोडक्सन टोलीको । हामीले पछ्याएको टोली हो “The Voice of Nepal” ।
टाइटल अलि अमूर्त छ हामी सजिलो पारीदिन्छौं । “द भ्वाइस अफ नेपाल” 180/130 ! अर्थात् एउटा कार्यक्रम उत्पादन गर्दा खर्च गरेको १५-१८ घण्टाको उर्जाले शरीर कति गाल्दो हो त? हामीले पछ्याएसम्म एउटा कार्यक्रम उत्पादनका क्रममा निर्देशक, निर्मताले सामना गरेको शारीरिक असहजताका कठिन समय हो 180/130 !
सोंच्नुस् तपाईंले यस अघि भोग्नै नपरेको 180/130 को रक्तचाप अचानक राती ३ बजे भोग्नुपर्यो जुन हरेक दिनको एउटा नियमितता नै बनीदियो । एकातिर भोलीका लागि फाइनल गर्नुपर्ने शोके अन्तिम् एडिटिङको प्रेसर अर्कोतर्फ शोका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मण पौडेलको बढ्दो रक्तचापको स्वास्थ्य जटिलता । हामी बेला बेला झसंग हुनु बाहेक अरु केही गर्न सक्दैनथ्यौं ।
180/130 को लाइनमा अर्का क्याण्डिडेट पनि उभिए अब पालो थियो कार्यकारी निर्माता प्रल्हाद सिंह महतको । उनी पनि अघिपछि गर्दै साथ दिंदै थिए निर्देशक लक्ष्मण पौडेलको दैनिकी र स्वास्थ्य जटिलतालाई । एक पटक भयो के भने कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मण पौडेललाई सारै असहजता भएपछि दिउँसै निर्माता महतले कुदाए नजिकैको मेडिकलमा रक्तचाप चेकजाँचका लागि । भयो के भने नजिकै कतैपनि गाडी पार्किङ थिएन र स्वास्थ्यकर्मीले दाई यता त हुन्न गाडी राख्न अहिले लान्छ ट्राफिकले भन्न थाले । निर्माता महतले भने भाई ड्राईभरको अचानक ब्ल्ड प्रेसर बढेर रोक्नुप्यो भन्देउ भन्दिए । तर नभन्दै यसो चेक गरेको निर्देशक पौडेल भन्दा १० बढी रक्तचाप कार्यकारी निर्माता कै देखियो । स्वास्थ्यकर्मीले निर्देशक पौडेललाई भने, “हजूर भन्दा त हजूरको ड्राइभरको प्रेशर बढी छ ।”
प्रेसर र तल माथी छँदैथियो हुँदा हुँदा कार्यकारी निर्माता महतको खुट्टो भाँच्चियो ३-४ दिन अघिमात्र खुट्टाको प्लाष्टर हटाइएको छ अाजभोली बैशाखीको सहारामा हिंडडूल गर्छन् उनी ।
यसरी तयार हुन्छ विश्वको नं १ रियालिटी शो को तपाईको प्रिय नेपाली संस्करण द भ्वाइस अफ नेपाल । सुपर सो का सुपर प्रड्यूसर र निर्देशकको कथा १८०/१३० अनि बल्ल अाइपुग्छ तपाईको घरघरको टेलीभिजन स्क्रिनमा । यही हो कथा “द भ्वाइस अफ नेपाल” 180/130 !
#द भ्वाइस अफ नेपाल
#प्रल्हाद सिंह महत